Ny Air Astana dia mampitombo ny fahita matetika amin'ny sidina mankany Tashkent
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Air Astana dia mampitombo ny fahita matetika amin'ny sidina mankany Tashkent
Air Astana dia nanampy fe-potoana faharoa amin'ny serivisy eo amin'i Almaty sy Tashkent, Ozbekistan manomboka anio, miaraka amin'ny sidina ny Alarobia sy Sabotsy. Ankoatr'izay, ny serivisy eo amin'i Nur-Sultan sy i Tashkent dia hitohy amin'ny 10th Desambra, miaraka amina herinandro isan-kerinandro isaky ny alakamisy.
Ny mpandeha rehetra tonga ao Ozbekistana dia takiana mba hanome mari-pankasitrahana PCR, na amin'ny teny Anglisy na Rosiana, miaraka amin'ny valiny ratsy azo nandritra ny 72 ora niaingany. Efatra ambin'ny folo andro ny fitokanana irery ao an-trano na any amin'ny hotely andoavam-bola koa takiana amin'ny fahatongavanao. Ny fitsapana PCR dia tsy voatery ho an'ny zaza latsaky ny 2 taona. Tsy mahazo alalàn'ny fandefasana any amin'ny firenena fahatelo amin'ny alàlan'ny Tashkent raha tsy misy fampandrenesana fanampiny.
Ny mpandeha rehetra tonga any Kazakhstan avy any amin'ny firenena vahiny dia tokony hanana fanamarinana fanadinana PCR ratsy alohan'ny telo andro alohan'ny hidirany ao amin'ny firenena. Ny olom-pirenena Kazakhstan tsy afaka manome taratasy fanamarinana dia iharan'ny karantina mandritra ny telo andro amin'ny fahatongavany ary ny mpandeha tsy Kazakhstan dia ferana tsy hiditra ao amin'ny seranam-piaramanidina fiaingana. Ny fitsapana PCR dia tsy voatery ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona.
Tanàn-dehibe amerikana tsara indrindra ho an'ny fankalazana ny taombaovao 2020